Maka foto ndị hụrụ ngwa kacha mma na Android | Akụkọ akụrụngwa
Otu n'ime ihe ndị kasị baa uru ojiji nke gam akporo ekwentị bụ ike ịse foto ma kesaa ya site na netwọkụ mmekọrịta ọ bụla ebe ndị enyi anyị ma ọ bụ ezi n’ụlọ anyị ga-ahụ ha n’oge a. Ewezuga inwe ike ịse foto dị mma, ọzọ nke uru anyị nwere na njedebe gam akporo anyị bụ ohere nke idezi ha iji nye ha mmetụ pụrụ iche nke na-eme ka ha nweta "ọkacha mmasị" na Facebook.
Anyị na-ewetara gị kacha mma foto ngwa ọdịnala na android nwere onye nchịkọta ihe onyonyo dịka Pixlr Express, netwọkụ mmekọrịta dịka Instagram ma ọ bụ akwụkwọ ahụaja dị ka Muzei n'etiti ngwa dị iche iche anyị ga-egosi gị n'okpuru iji nyere gị aka ịhụ foto n'anya karịa.
7 Muzei Live Na akwụkwọ ahụ aja
Maka m ọ bụ ihe ndị ahụ dị mkpa iji dezie ihe oyiyi na gam akporo, na ọ gaghị efu site na ngwaọrụ ọ bụla ị nwere. Omume ọma nke Pixlr Express dị ọtụtụ, mana ọ bụrụ na anyị na-ekwu na ndị otu n’azụ mmepe ya bụ Autodesk, ọtụtụ n’ime unu ga-aghọta ihe kpatara oke mma ya. Autodesk emeela mmemme dị ebube dịka AutoCad ma ọ bụ Maya n'onwe ya.
Pixlr Express nwere a nnukwu nhọrọ. Ke akpa udi nke «ukpụhọde» ị ga-ahụ site na ngwaọrụ dị ka mmezi, blur, stylize, akuku, bugharia, akpaka mgbazi nke ihe oyiyi na-acha ọbara ọbara anya, ka nhọrọ ịgbanwe iche, ike, nkọwa ma ọ bụ agba.
Mgbe ahụ na “Mmetụta”, ị ga - enwe ikike gị ọtụtụ ihe nzacha dị egwu iji tinye na foto gị iji nye ya anya pụrụ iche. Devid agụghị ndị gbara, nwa na-acha ọcha ma ọ bụ ihe ụdị ụdị nzacha ole na ole aha. Ewezuga inwe ike itinye ihe nzacha ndị a, anyị nwekwara ole na ole iji tinye ụdị mmetụta niile dị ka anwụrụ ọkụ, oghere ma ọ bụ oku oku.
Iji mechaa dezie foto ahụ ịchọrọ inye mgbatị, ị nwere "Oke" na ọtụtụ atụmatụ dị iche iche, ihe dị mkpa dị iche iche dị iche iche na akara ngosi nwere ihe oyiyi iji mee ọbụna nchịkọta.
Enwetara Snapseed afọ Google gara aga ma anyị nwere ike ikwu nke nwere ihe nzacha kacha mma ị nwere ike ịchọta na ngwa dị otú ahụ. Ọdịdị ọ bara uru na-eme ka ọ bụrụ onye na-asọ mpi nke Pixlr Express, yabụ ọ bụrụ na mmadụ enwee mmasị idozigharị ihe onyonyo, ihe kachasị mma bụ na ịnwe ngwa abụọ awụnyere na ama gị.
Snapseed nwere ọtụtụ nhọrọ Pixlr nwere mana na-elekwasị anya n’itinye ihe nzacha ya dị ịtụnanya. Ngwaọrụ dịka mmezi akpaaka, nhọta nhọrọ, dozie onyonyo, gbanwee ma ọ bụ kụrụ n'etiti isi. Mgbe ahụ, anyị nwere ike ịbanye na ọtụtụ nzacha nke ngwa ahụ nwere, nke dị ọtụtụ na nke enweghị atụ.
Vintage nzacha, ejije, HDR, Grunge Tilt-Shift ma ọ bụ oji na ọcha, bụ ihe ị ga-ahụ na Snapseed, na-emecha foto na-emegharị ihe ọzọ na nhọrọ iji tinye okpokolo agba iji mechaa na foto na nke ị chọrọ iju nye onye gi ma obu ndi enyi gi.
Y’oburu n’agbanyeghi ihe obula ichoro itinye foto ozo retouching ngwa, odi ozo nke ahụ abụghị obere ma e jiri ya atụnyere ya nye mmadụ abụọ ahụ e kwuru na mbụ. PicsArt bụ onye nchịkọta foto na - enweghị ihe ọ bụla dịka Pixlr na Snapseed, ọ nwere ọtụtụ nhọrọ na ngwaọrụ dị ka nzacha, collages, okpokolo agba, ala, akara, ederede ederede, clipart, cropping, rotation ma ọ bụ mgbanwe agba.
E wezụga ngwaọrụ ọ nwekwara nzacha itinye na onyonyo gị nchịkọta nchịkọta iji mepụta ihe oyiyi dị otú ahụ na ntanetị maka foto ma ọ bụ nwee ike iji ya kpamkpam itinye foto na nzụlite.
Gị ihe karịrị nde 100 nbudata kwadoo ya dị ka ngwa foto na-adọrọ mmasị maka ekwentị mkpanaaka gị.
La foto elekọta mmadụ na netwọk par kacha mma ọ bụ Instagram. Na kpomkwem na a ọhụrụ version maka gam akporo ulo oru ụbọchị abụọ gara aga na kpamkpam ọhụrụ ya ọrụ interface na-eme na-eme nchọgharị ngwa ọzọ obi ụtọ.
Ndị hụrụ foto n'anya ga-ama banyere Instagram, na-enye onyinye ohere nke ịbugharị ihe oyiyi anyị na mgbe ahụ ịkọrọ ha ndị ezi na ụlọ na ndị enyi, ma ọ bụ nwee ha tupu ụwa ka ha nwee ike ịnụ ụtọ ma kwuo okwu na ha ma ọ bụrụ na anyị ewere otu n'ime foto ndị ahụ n'afọ.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ foto magburu onwe ya, 500px bụ otu n'ime ngwa kachasị mma ị nwere ike iwunye na gam akporo gị. Netwọk mmekọrịta iji sonye na nnukwu obodo ọ nwere na nke ahụ ga-enye gị ohere isoro ndị na-ese foto ahụ kpakọrịta na ọ kacha amasị gị foto ya.
500px bụ otu n'ime ngwa ndị ahụ dị mkpa maka ndị hụrụ foto.
N'adịghị ka nke gara aga, Dayframe na-enye ohere gbanwee ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba gị ka ọ bụrụ ezigbo foto foto. Dayframe na-arụ ọrụ na foto dịka Facebook, Instagram, Tumblr, Google+, Dropbox, Flickr na 500PX.
Mbadamba gị ga - abụ ebe foto ị nwere ike ịme ihe ihe ngosi nke foto gi yanakwa ndị nke ọrụ ndị a kpọtụrụ aha.
Muzei Live Na akwụkwọ ahụ aja
Akwụkwọ ahụaja Muzei ga-elekọta nye ihe nlere na desktọọpụ nke mbadamba nkume ma ọ bụ ekwentị gị. N'ihe ndọtị ọ ga-enwe ike ịwụnye ha site na Storelọ Ahịa Play dịka ndọtị 500px, Flickr, Tumblr ma ọ bụ APOD iji nweta foto NASA kacha mma ụbọchị ahụ. Si ebe a ị nwere ike ịga na ndọtị 8 kachasị mma nke Muzei.
Muzei nọnyeere anyị obere oge mana ọ na-aghọrịrị onye nke kasị mma akwụkwọ ahụaja maka foto ndị hụrụ na gam akporo.
Iji mechaa, enweghị m ike ịhapụ ya ihe ezigbo ihe onyonyo pụtara na gam akporo. Anyị nwere Google gallery anyị dị ka ọkọlọtọ, mana Quickpic bụ otu n'ime ndị ọzọ kachasị mma ị nwere ike ịchọta na Storelọ Ahịa Play.
Ngwa nke pere mpe na megabytes, na-arụ ọrụ nke ebube ma nwekwaa ngwa ọrụ ndị a na-atụgharị, nyegharịa, ma ọ bụ setịpụ dị ka desktọọpụ na ekwentị anyị Akwa onyonyo onyogho nke na-agaghi efu na listi ngwa etinyere ma rite uru na itinye ya na nke ohuru A gam akporo 4.4 KitKat immersive mode.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ngwa kacha mma foto maka gam akporo
Nsonaazụ 3D ọ dị egwu n'ezie maka anya?